Ahoana ny fanovana habe ny sary masina amin'ny macOS | Avy amin'ny mac aho
Apple dia niavaka foana tamin'ny alàlan'ny fanolorana safidy marobe ampanjifaina rehefa manamboatra ny fitaovantsika raha manana olana amin'ny fahitana isika. Ao anatin'ny safidin'ny fanaingoana dia mamela antsika ny macOS manitatra na mampihena ny haben'ny sary masina aseho eo amin'ny biraonao
Ny fampiakarana na ny fihenan'ny haben'ny biraon'ny birao amin'ny solo-saintsika dia afaka manampy antsika hametraka entana bebe kokoa amin'ny birao (mampihena ny habeny) na hanitatra ny habeny fotsiny mba hahitana tsara kokoa ny anarana sy ny ampahany amin'ny atiny. Tsotra be ity dingana ity ary avy any amin'ny Mac aho dia asehonay anao ny fomba hanatanterahana izany.
Be loatra ho an'ny manitatra mba hampihena ny haben'ny sary masina amin'ny birao, mila mametraka ny tenantsika na aiza na aiza misy azy isika ary tsindrio ny bokotra havanana totozy na tsindrio amin'ny rantsan-tànana roa eo amin'ny trackpad.
Manaraka, tsindrio eo Asehoy ny safidy aseho. Ao amin'ny menio aseho etsy ambany, hitantsika fa ny haben'ny kisary default dia 64 × 64 teboka. Raha te hanitatra na hampihena ny haben'ny sary masina isika dia mila manosika ny bara ankavia fotsiny, raha te-hanao azy ireo ho kely kokoa, na ho amin'ny ankavanana, raha te hampitombo azy ireo bebe kokoa isika.
Ny safidy manaraka dia mamela antsika apetraho eo amin'ny takelaka birao ny habaka fisie, Amin'izany fomba izany no ahafahantsika manitatra na mampihena ny elanelana misy eo amin'ny fisie. Izy io koa dia ahafahantsika manitatra ny haben'ny lahatsoratra ao amin'ny birao sy manova ny toeran'ny mari-pamantarana rakitra.
Ho fanampin'izany, mamela antsika ihany koa izy io asehoy ny topy maso ny thumbnail an'ireo fisie, miaraka amin'ny antsipirian'ny rakitra, mety indrindra rehefa manana lahatahiry na sary marobe amin'ny birao Mac. Rehefa vita ny fanovana rehetra tadiavinay, dia akatonay ny varavarankely. Isaky ny manao fanovana isika dia haseho eo amin'ny birao avy hatrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fanovana habe ny sary masina amin'ny macOS
Hahita HomePod amidy latsaky ny 200 euro ve isika?
The Pad, ity no tilikambo naorin'izy ireo any Dubai izay mifototra amin'ny iPod